ANDRAVOAHANGY : Sarona ny ekipan’ilay ramatoa mpivarotra rongony, efa nifonja
Olona roa ka ramatoa ny 01, no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP3 Antaninandro teny Mascar/Andravoahangy, ny 20 septambra 2019 lasa teo nohon’ ny resaka fivarotana rongony. 23 septembre 2019
Taorian’ny angom-baovao voarain’ny Polisy miasa ao amin’ny CSP3 izay milaza fa misy olona mivarotra rongony eny amin’iny faritra Andravoahangy sy ny manodidina iny dia nandray ny andraikiny avy hatrany izy ireo. Natao ny fanaraha-maso sy ny paikady ka lehilahy 01, 32 taona sy ramatoa 01, 39 no tra-tehaka teo am-panaovana izany asa ratsy izany. Mbola nahatrarana rongony 10 fonosana teny amin’izy ireo nandritra ny fisamborana azy.
Tamin’ny fanadihadiana no nahafantarana fa vidiany eny Ankorondrano amin’ny vidiny 500Ariary ny singany 01. Izy ireo kosa avy eo no mamatsy an’Andravoahangy, Mascar ka amidiny 1000Ariary ny fonosana 01. Ilay ramatoa kosa dia efa nigadra teny amin’ny fonjan’Antanimora resaka famarotana rongony ihany. Tsy mitsahatra manentana ny mponina ary koa manao fisafoana ny tanana fieren’ny jiolahy sy fiparitahana zava-mahadomelina ny mpitandro filaminana.